Rasaas Wiifto ah oo kusoo dhacaysa madaxtooyada Villa Somaliya iyo Saraakiisha kooxda Riddada oo cabsi aad u xoogan muujinaya. | Halganka Online
Rasaas Wiifto ah oo kusoo dhacaysa madaxtooyada Villa Somaliya iyo Saraakiisha kooxda Riddada oo cabsi aad u xoogan muujinaya.
Xiisada colaadeed ayaa ka taagan hareeraha madaxtooyada Viila Somaliya oo fariisin u ah madaxda kooxda Riddada ee uu hogaamiyo shariif Sheekh Axmed waxaana halkaasi ka jira cabsi aad u xoogan.
Rasaas goos goos ah ayaa laga maqlayay degmada Wardhiigleey gaar ahaan goobaha ay isku hor fadhiyaan Ciidamada Mujaahidiinta iyo Maleeshiyada Kooxda Riddada waxaana lasoo sheegayaa in ciidamada gaalada Yugaandhiiska ee Villada ku sugan heegan la geliyay .
Dhawaqa rasaasta yar yar ayaa si weyn looga maqlayaa xaafadaha ku dhow Xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, iyadoo rasaasta qaar kood ay garaaysay afaafka Villa Somaliya oo ay ku xaranyihiin madaxda Riddada.
rasaas Liif Liif ah oo ay mujaahidiintu ku ridayaan Villa Somaliya ayaa sababtay in madaxda Kooxda Riddada ah dhaq dhaqaaq ka sameeyaan dhismayaasha Villa Somaliya.
Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa dhawaan sheegtay in ay xoog kula wareegi doonto garoonka iyo madaxtooyada Villa Somaliya oo ah goobo laga dhibaateeyo shacabka Muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho.
« Macalin Xaashi oo shaaciyay in ay soo dhaweynayaa Jihaadka caalamiga ah ee uu Caalamka ka wado Ururka Al Qaacidda digniina u diray Idaacadaha Heesaha ku fasahaadiya shacabka Muslimiinta ah. Ciidamada Xisbada Wilaayada islaamiga Sh/Dhexe iyo Maleeshiyo Burcad ah oo isku rasaaseeyay duleedka deegaanka Raaga Ceelle. »